Kevin De Bruyne waa Xiddiga ugu fiican khadka dhexe xiligaan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Kevin De Bruyne waa Xiddiga ugu fiican khadka dhexe xiligaan?
(10-1-2018) Cayaaryahankii hore ee kooxda kubada Cagta Manchester City ee Paul Dickov ayaa sheegay in laacibka khadka dhexe ee De Bruyne uu yahay xiddiga ugu wanaagsan qaaradda Yurub ee khadka dhexe ka ciyaara.
De Bruyne oo kulankii wakhti daayaca ay Man City kaga badisay Bristol City tartanka Carabao Cup, ayaa waxa uu Paul Dickov ku sifeeyey in aanu jirin ciyaaryahan wakhtigan ka wanaagsan khadka dhexe xiddiga reer Belgium.
“Waa ciyaartoy heersare ah. Ma filayo in dhex ka wanaagsan Kevin De Bruyne ay jirto wakhtigan qaaradda Yurub” Sidaas ayuu yidhi Dickov oo subaxnimadii hore ee warbaahinta la hadlayay Sports Breakfast.
“Dadku waxay ka hadlaan qaabka uu u ciyaaro, goolasha u dhaliyo ama u caawiyo, laakiin sidoo kale eega inta aanu kubadda haysan, waa mishiin wareegaya. Haddii aad eegto ciyaarihii ugu dambeeyey, Pep Guardiola ciyaartooyo badan ayuu nasiyey, laakiin De Bruyne maalin walba wuu taagnaa. Waxa cajiib ah caafimaad-qabkiisa.” Ayuu ku daray.